म्युजिक भिडिओ 'रि-डिफाइन' गर्ने २६ वर्षीय निर्देशक !!! - Sajha Entertainment
Home/फोटो/म्युजिक भिडिओ ‘रि-डिफाइन’ गर्ने २६ वर्षीय निर्देशक !!!
म्युजिक भिडिओ ‘रि-डिफाइन’ गर्ने २६ वर्षीय निर्देशक !!!
Sharmila Gurung Send an email २५ आश्विन २०७७, आईतवार १४:०८
लाखौंले मन पराएको ‘तीनपाते’ गीत लेखिनुअघि नै हँसिला-रसिला थिए नवीन चौहान। उसै उज्याला नवीनको मुहारको चमक पछिल्ला तीन महिनामा पाएको सफलताले अझै बढेको छ।
नहोस् पनि कसरी! यो अवधिमा उनले निर्देशन गरेका दुई गीतले पाएको माया र चर्चा लेखिसाध्य छैन। अहिलेसम्म नवीन निर्देशित ‘के माया लाग्छ र’ ले एक करोड ६४ लाख र ‘तीनपाते’ ले ७९ लाख हाराहारी युट्युब भ्यूज पाइसकेको छ। यी दुवै गीतमा टिकटक बनाउनेको संख्या लाखौं छ।
‘आफैं मुस्काऊ मुसुक्क, जुन तारा टिपी कोही दिँदैन।’
अहिले नवीनलाई हेर्दा लाग्छ, गीतकार हर्क साउदले यी लाइन नवीनलाई नै हेरेरै फुराएका हुन्!
संख्यात्मक रूपमा नवीनले निर्देशन गरेका म्युजिक भिडिओ धेरै छैनन्- ‘सम्झनालाई’, ‘लुकिछिपी’, ‘बटौली’, ‘के माया लाग्छ र’ र ‘तीनपाते’।
यी पाँच गीतका भिडिओ नवीनको सोच, शैली र क्षमता हेर्न र बुझ्न पर्याप्त छन्।
पहिलो भिडिओ ‘सम्झनालाई’ बाटै सम्भावना देखाएका नवीनले दोस्रो भिडिओ ‘लुकिछिपी’ बाट दुइटा इमेज अवार्ड जिते। पछिल्लो काम तीनपातेलाई त उनले आम म्युजिक भिडिओभन्दा फरक देखिने गरी ‘अ म्युजिकल फिल्म’ नै भने।
दस मिनेट लामो तीनपातेको भिडिओ नवीनको फरक काम मात्रै बनेन, नेपाली म्युजिक भिडिओमध्येकै एउटा राम्रो कामका रूपमा दरिन पुग्यो। ‘तीनपाते’ हेरेर धेरैले उनलाई नेपाली म्युजिक भिडिओ ‘रि-डिफाइन’ गर्ने निर्देशक समेत भने।
भन्नलाई त हामीसँग गंगा छ , तर सबैको पाप तिनै सँग छ ll(तद्का खबर)
पूर्वप्रधानन्यायाधीश रायमाझीको संस्मरण बजारमा !!!